တရုတ်နိုင်ငံရှိ EU Natural Gamma Nonalactone ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ - ODOWELL
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အနံ့ဓာတုပစ္စည်းများ > သဘာဝအနံ့ဓာတုပစ္စည်းများ > အီးယူသဘာဝ Gamma Nonalactone
EU Natural gamma nonalactone သည်အရောင်ဖျော့ဖျော့ရှင်းပြီးအဆီပြန်သောအရည်ဖြစ်သည်။
အီးယူသဘာဝ Gamma Nonalactone အခြေခံသတင်းအချက်အလက်
အီးယူသဘာဝ Gamma Nonalactone ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၀.၉၇၆ ဂ / mL (lit) ။
အီးယူသဘာဝ Gamma Nonalactone အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတင်းအချက်အလက်
EU သဘာဝ Gamma Nonalactone MSDS သတင်းအချက်အလက်
EU Natural Gamma Nonalactone (5-Pentyloxolan-2-one) သည်အရောင်ဖျော့ဖျော့ရှင်းပြီးအဆီပြန်သောအရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Bourbon ဝီစကီ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်သီးများ၊ ဖရဲသီး၊ သင်္ဘောသီး၊ နာနတ်သီး၊ လတ်ဆတ်သောဘလက်ဘယ်ရီစသည်တို့တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဒါဟာအစစပါးပိုးတောင်မာပိုးမွှား.4များအတွက်အလားအလာ Multi- မျိုးစိတ်ဆွဲဆောင်ဆွဲဆောင်သည်
2. ဂျော့ခ်ျအေဘာဒွတ်၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အရောင်အပိုဆောင်းစွယ်စုံကျမ်း၊ တီးဝိုင်း ၁၊ ၁၉၉၆၊ ISBN 0-8493-9416-3
EU Natural Gamma Nonalactone သည်အစားအစာများစွာတွင်တွေ့ရပြီးအုန်းသီးကဲ့သို့သောအနံ့ရှိသောအဝါရောင်ဖျော့ဖျော့အရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အနံ့နှင့်ဆိုင်သောအမွှေးအကြိုင်များနှင့်ရေမွှေးများတွင် ?? - octalactone နှင့်ဆင်တူသည်။
မက်မွန်သီး၊ နာနတ်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ဘလက်ဘယ်ရီ၊ စတော်ဘယ်ရီယို၊ ကညွတ်၊ ကညွတ်၊ ဂျုံနှင့် crispbread၊ ကမ်မမ်ဘာဒိန်ခဲ၊ ထောပတ်၊ နို့၊ ကြက်၊ အမဲသား၊ ဝက်သားအဆီ၊ ချက်ထားသောအမဲသားနှင့်ဝက်သား၊ ဘီယာ၊ cognac, ဝီစကီ၊ ရှယ်ရီ၊ စပျစ်ရည်ဝိုင်များ၊ ကိုကိုး၊ လက်ဖက်စိမ်း၊ Pecan, oats, soybean, avocado, စိတ်အားထက်သန်သောသစ်သီး၊ Plum, Plumcot၊ ဆန်၊ သစ်တော်သီး၊ ဂျုံ၊ ဂျုံ၊ licorice၊ Malt၊ wort၊ cherimoya၊ Bourbon vanilla၊ ပုစွန်၊ ဝတ်ရည်၊
EU Natural Gamma Nonalactone သည်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖြစ်ပြီးအရောင်မှအဝါရောင်အရည်ဖြစ်သောအုန်းသီးကဲ့သို့သောအနံ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံသေအဆီများ၊ တွင်းထွက်ဆီများနှင့် propylene glycol တို့တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အက်ဆစ်တွင်တည်ငြိမ်ပြီးအယ်ကလီလီယမ်တွင်မတည်ငြိမ်သောကြောင့်ဖန်၊ သံဖြူနှင့်လူမီနီယမ်ကွန်တိန်နာများတွင်သိုလှောင်ထားသင့်သည်။ ၎င်းသည်အုန်းသီးအရသာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၁၁ စက္ကန့်မှ ၅၅ ppm တွင် gelatins၊ puddings, baked products, candy နှင့် ice cream တို့တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို aldehyde c-18 ဟုလည်းခေါ်သည်။
EU သဘာဝ Gamma Nonalactone ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ကြမ်းများ
hot Tags:: EU Natural Gamma Nonalactone, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်း, သိုလှောင်ထား, အခမဲ့နမူနာ, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူများ, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်, စျေးနှုန်းနိမ့်, အရည်အသွေး, 1 နှစ်အာမခံ
အီးယူသဘာဝ Gamma Nonalactonesgamma nonalactone သဘာဝကသဘာဝအ gamma nonalactoneအီးယူသဘာဝအီးယူသဘာဝ Gamma-Nonalactonegamma-nonalactone သဘာဝ